Indlela ukuze alulame indoda? Lo mbuzo uvame ebuzwa guys abasha Yakha asthenic, abafuna ukuba emahlombe omkhulu, izingalo, esifubeni, emuva nezinqulu akhishwa. Kodwa akuzona zonke izingane eziphathwa njalo wazi lapho ukuqala nendlela yokuthatha isinyathelo ukuze sizuze yemisipha. Abanye amathiphu kanye neseluleko yokudla okunempilo esinikezwe kulesi sihloko.
The main "amabhlogo wokwakha" ekunqumeni ukuthi alulame umuntu - ukudla kahle kuhlelwe, okunama-kilojoule amaningi, ukuqeqeshwa ukucabanga kahle futhi isimiso sansuku zonke.
Indlela ukuze alulame indoda? Ngokuyinhloko, kufanele uyinaka umsoco. Esikhathini Ukudla kufanele imikhiqizo ngempela isipho amaprotheni, okungcono okuvela ezilwaneni (okufana kangcono amuncwa wumzimba). Kungaba amaqanda, inyama, ongaphakeme-fat fish. Qiniseka ukuthi ufake ekudleni kwabo imenyu equkethe carbohydrate. Makudle zona lezo zitsha abacebile okuthiwa "bese wehlisa" carbohydrate - kuyinto oatmeal, pasta, isinkwa wholemeal.
Nakani ekhethekile ukumelela izitsha, adle irayisi okuningi, nokunye okufana nokolweni, amabele, oatmeal. Yidla kakhulu imifino nezithelo ezintsha - Nakuba zingakubonisi aqukethe eningi kilojoule, kodwa abacebile amavithamini namaminerali ehilelekile izinqubo umzimba. Kubalulekile ukuqonda imininingwane kanjani ukuba alulame ndoda. Qiniseka ukuhlela imenyu yakho ukuze amakhefu phakathi ukudla main zisezincane - akukho ngaphezu kwamahora amathathu. Uma ungatholi ukudla okugcwele - isidlo nemishayo, izithelo ezomisiwe nobhanana.
Ukudla kwasekuseni kufanele kube okunomsoco - inikeza amandla usuku lonke. Inketho engcono kungaba ngaye iphalishi. Ungakwazi ukwengeza it nati, ushizi, izithelo ezomisiwe noma uwoyela. I samuntu elihle kakhulu wokudla njengendlela dish side ukuze ucezu abilisiwe inyama cutlet noma isisi. Ngakho-ke, ibhulakufesi sizonikeza kokubili amandla kanye emabhuloki ekwakha ngoba imisipha.
Isidlo sasemini futhi obalulekile "isakhi" kuyi-nendlela alulame umuntu ngokushesha. Qiniseka ukuthi sidle kathathu. Kungcono ukuthola ukuphumula ntambama, sokwetshisa kangcono nokudla nezakhi waqhubeka kwemisipha ukukhula.
Dinner kuyinto efiselekayo ukwenza amaprotheni. Yidla kufanele kube kungakapheli 19,00. Ebusuku amaprotheni ngenkuthalo wakwamukela futhi asetshenziswe "ukwakhiwa" kwemisipha.
Phakathi kwamakhamera ocingo, ukudla main baphuze amaprotheni (amaprotheni) cocktail. Bona angathengwa ikhemisi noma ezikhethekile ezemidlalo esitolo. Phakathi Amazing, aphuze ukoma ezinhle quencher. Nokho, akufanele athole wathumba - kungenjalo kuyoba nzima ukubhekana nazo usuthi.
Ngaphambi kokuthi uqale ukwakha mass, ubonane Umqeqeshi abanekhono. Kuyinto ukuba amphuzise uhlelo ukuqeqeshwa ukusebenza neqembu elilodwa kwemisipha. Ezinsukwini ezilandelayo, izophila uphumule futhi ukhule.
Qiniseka ukuqala kwezinsuku ezimbalwa lokuphumula. Ngalesi sikhathi umzimba uyalulama ngokushesha futhi yemisipha iyakhula. Ungakhohlwa mayelana iphupho egcwele. Ngesikhathi esho futhi uye wakwenza ngokuzimisela ukwakha kwemisipha izicubu. Sethemba la amathiphu kuyokusiza ukuba ukuxazulula inkinga kanjani ngokushesha ngcono umuntu, ukuba kukhuphuke imisipha enhle.
Umzimba Dumbbell - isiqinisekiso impilo nokuphila kade
Push uhlelo: isikimu. Push-ups kusuka phansi Wabasaqalayo
Ezemidlalo inikwa amandla yi-Optimum Nutrition kuzokusiza uyifinyelele imiphumela amazing
Coffee Paulig: incazelo kanye nokubuyekeza
Tulips: nokuphoqa ekhaya futhi kule abamba ukushisa
Buyekeza - yinqubo ngokubhala ukubuyekeza umsebenzi yesayensi
I-coefficient of profitability yezimpahla njengendlela yokubonisa ukusebenza kwazo
Baphi kweMigede YaseCarlsbad
Gemini futhi Libra kwedivayisi uphawu